ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख नेपालीद्धारा कोरोना कहरमा २३ लाख बरावरको सहयोग - ढोरपाटन पोष्ट
ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख नेपालीद्धारा कोरोना कहरमा २३ लाख बरावरको सहयोग
बुर्तिबाङको स्वास्थ्य केन्द्रमा ९ लाख बरावरको ३० थान अक्सिजन सिडिन्डर हस्तान्तरण
२०७८ जेष्ठ १०, सोमबार १८:२८
ढोरपाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख देव कुमार नेपालीले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुर्तिबाङमा व्यक्तिगत रुपमा खरिद गरिएको करिव ९ लाख रुपैयाँ बराबरको ३० थान (ठूलो) अक्सीजन सिलिन्डर हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।
आइतबार मात्र जिल्ला सदरमुकाम स्थित धौलागिरी अस्पतालमा नगद ५ लाख सहित ३० थान अक्सिजन सिडिन्डर सहयोग गनुभएका नेपालीले फेरि स्वास्थ्य केन्द्र बुर्तिबाङमा यो सहयोग गर्नुभएको हो ।
नगर प्रमुख नेपाली कोरोना कहरमा आफ्नो व्यक्तिगत रुपमा सामाजिक उत्तरदायित्वका हिसावले सहयोग गर्ने मध्येका अग्र पक्तिमा रहनुभएको छ । नेपालीले धौलागिरी अस्पतालमा ९ लाख रुपैयाँ बरावरको ३० वटा अक्सिजन सिलिन्डर र नगद ५ लाख रुपैयाँ गरि १४ लाख रुपैयाँ बरावरको सहायता गर्नुभएको हो ।
धौलागिरी अस्पतालमा बागलुङ जिल्लाका मात्र नभई छिमेकी जिल्लाहरु म्याग्दी, पर्वत लगायत स्थानका नागरिकहरु पनि उपचारका लागि आउने भएकाले अक्सीजन र औषधी अभावकै कारण कोही पनि संक्रमितले अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्दै आफ्नो क्षमता अनुसार सहयोगीका रुपमा अगाडी आएको नेपालीको भनाई छ ।
यता बुर्तिबाङ स्वास्थ्य केन्द्रमा रु. ९ लाख बराबरको थप ३० थान अक्सिजन सिलिन्डर सहयोग गर्नुभयो । उहाँले कोरोना कहरमा नागरिकको जीवन रक्षाका लागि आफ्नो तर्फबाट २३ लाख बरावरको सामाजिक उत्तरदायित्वमा सहयोग पु्याउनुभएको छ ।
कोरोना महामारीको समयमा स्वास्थ्य केन्द्रमा अक्सिजन सहितको उपचार गरिन थालिएको स्वास्थ्य केन्द्रमा अक्सीजन अभाव नहोस् भनेर सहयोग गरेको नगरप्रमुख नेपालीले बताउनुभयो । नगर प्रमुख नेपालीले उक्त सिलिन्डर स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिका अध्यक्ष चित्रबहादुर भण्डारी र स्वस्थ्यकेन्द्र प्रमुख डा. मिलन मल्ललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
स्वास्थ्य केन्द्र बुर्तिबाङमा अहिले ८ जना विरामीको अक्सिजन सहित उपचार भइरहेको छ । आइसोलेशनमा ढोरपाटनका ४ जना, निसीखोलामा ३ जना र बडिगाडका १ जनाको उपचार भइरहेको स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डा. मिलन मल्लले जानाकारी दिनुभयो । यस्तै लक्षण सहितका केही विरामीहरु स्वास्थ्य केन्द्रको इमेरजेन्सि कक्षमा समेत उपचाररत रहेका छन् ।
संसद पुनस्थापना गर्न १४६ जना सांसदहरुको सर्वोच्चमा रिट